Khudbaduu Madaxweyne Siilaanyo ka Hor akhriyay labada Gole, Akhriso | FooreNews
Home wararka Khudbaduu Madaxweyne Siilaanyo ka Hor akhriyay labada Gole, Akhriso
Khudbaduu Madaxweyne Siilaanyo ka Hor akhriyay labada Gole, Akhriso
fooreJan 14, 2012wararka0
Adhi = 2,386,705 neef
Lo’o = 529,195
Geeluna = 470,540
Waxa la sameeyay sahan lagu qiimaynayo cuntada dalka ka soo go’day, taas oo lagu qiyaasay in ay dalka ka soo go’een isugayn 66,451 ton oo hadhuudh ah iyo arabikhi dhan60,997 tons. Wasaarada Beeruhu waxay ogaatay celcelis ahaan roobka wadanka ka da’ay. Iyada oo kaashanaysa qalab roobbeedyada lagu rakibay gobolada, Waxa dalka laga beeray Bariis, waxaanan, Mudanayaal, idiin cadaynayaa inuu ahaa mid damcadiisa dhadhan ay aad u macaan tahay oo aan aniga laftaydu cunay aadna ugu farxay, waxaa beeralayda loo qaybiyay qalab beereedyo kala gadisan oo dhan. 10 Cagaf cagaf oo cusub oo qiimo jaban lagu tartansiiyay beeralayda dalka iyo qalab kale oo badan.
waxaanan idinkula dardaarmayaa inaad isku duubnaataan, illaalisaan qaranimada si looga midha gaadho himilada umadani mudada dheer ku naaloonaysay.
Aad baa u mahadsantihiin
Previous PostMaamulka degmada Bali-dhiig oo aasay 7 Barkadood oo laga qoday dhul daaqsimeed Next PostDr. Gaboose oo si balaadhan loogu soo Dhaweeyay Magaalada Ceerigaabo